[Ukara] dr.fone Toolkit - Android Data Mmịpụta: Naghachi Data si Broken gam akporo
Gbalịa Ọ Free
iOS Data ndabere & Weghachi
iOS WhatsApp Nyefee, ndabere & Weghachi
iOS Viber ndabere & Weghachi
iOS Kik ndabere & Weghachi
iOS EZIOKWU ndabere & Weghachi
iOS Full Data nchicha
iOS Private Data nchicha
SIM Kpọghe Service
iOS Screen edekọ
Gam akporo Data Recovery
Gam akporo mkpọchi ihuenyo mwepụ
Gam akporo Data Mmịpụta
Gam akporo Data ndabere & Weghachi
Gam akporo SIM Kpọghe
gam akporo Root
Gam akporo Data ichicha
Gam akporo Screen edekọ
MobileTrans Phone Nyefee
MirrorGo gam akporo edekọ
dr.fone Toolkit - Android Data Mmịpụta (mebiri emebi Ngwaọrụ)
Ụwa 1st data icheta software maka agbajikwa na gam akporo ngwaọrụ.
N'atu icheta ọnụego na njem.
Naghachi photos, videos, kọntaktị, ozi, na-akpọ ndekọ, na ndị ọzọ.
Ò Kwekọrọ n'Ozizi na Samsung Galaxy ngwaọrụ.
Gbalịa Ọ Free Buy Ugbu a
Anyị nwere ike inwe n'ime gị mebiri emebi na ngwaọrụ na-esi na gị faịlụ azụ.
Lee All Atụmatụ
Ọ bụghị nzahachi
kpọchiri akpọchi Device
Naghachi Data sitere Broken gam akporo na ọnọdụ dịgasị iche iche
Iche iche mere na-akwado, dị ka mmadụ na mberede mebiri emebi na ihuenyo gị gam akporo ngwaọrụ, na ihuenyo na-aghọ nwa na-egosi ihe ọ bụla na ya, ike ga-esi n'ime usoro maka amaghị ihe mere, na-enweghị ike na-emeghe USB debug, echefu mkpọchi ihuenyo paswọọdụ, ọ dịghị nzaghachi na ihuenyo mmetụ na ndị ọzọ.
Iṅomi na Preview maka Free
Ị nwere ike iji free ikpe version a gbajiri gam akporo data mgbake software ka iṅomi na preview data na ngwaọrụ gị, nke mere na i nwere ike ikpebi nke item naghachi.
Naghachi n'aka SD Kaadị na android
Ọ bụghị nanị na esịtidem kaadị ebe nchekwa, a gbajiri gam akporo data mgbake software-enyere ka iṅomi ma gbakee data gị SD kaadị na agbajiela ngwaọrụ.
Recoverable Files si gbajie na gam akporo ngwaọrụ
Ị nwere ike mbupụ gị na kọntaktị na CSV, HTML na VCF formats na kọmputa, mfe maka mgbe e mesịrị iji. Ma zọpụta ozi na gị agbajikwa gam akporo ngwaọrụ na HTML format na kọmputa maka mfe ịgụ ma ọ bụ na-ebi akwụkwọ. Maka photos, video, ọdịyo na ọzọ di iche iche nke akwụkwọ, i nwere ike ịzọpụta ha n'ebe ọ bụla na kọmputa gị, dị ka ogologo dị ka ị pụrụ ịhụ ha n'ụzọ dị mfe.
Na-arụ ọrụ dị ukwuu na gam akporo Ngwaọrụ
Ugbu a, a gbajiri gam akporo data mgbake mmemme arụ ọrụ zuru okè n'ihi na nza nke Samsung ntị na mbadamba, dị ka Galaxy S usoro, na Galaxy Note usoro, wdg Dị ka ndị ọzọ ụdị nke gam akporo ngwaọrụ, echegbula. Ọ ga-abịa nnọọ anya na n'ọdịnihu dị nso.
Nke a gbajiri gam akporo data mgbake mmemme kpamkpam na-agụ-na-software. Ọ gaghị anọgide na, gbanwee ma ọ bụ ihihi ọ bụla data na ngwaọrụ gị ma ọ bụ na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Anyị na-gị onwe onye data na akaụntụ kpọrọ ihe. Ị na-na na mgbe niile bụ naanị onye nwere ike ịnweta ya.
Complete gam akporo Ndakọrịta
Cheta 3, Cheta 4, Rịba ama 4 Edge, Rịba ama 5, Rịba ama 5 DUOS, Rịba ama 8, Note II
Ihuchalu ndepụta nke na-akwado ngwaọrụ >>
1GHz (32 bit ma ọ bụ 64 bit)
256 MB ma ọ bụ karịa nke RAM (1024MB aro)
Ike Njìàrụọrụ Space
200 MB na n'elu free ohere
Gam akporo 5.0 na mbụ
Weghachite Files Site ...
Ike iṅomi gị na ngwaọrụ na-agbake data
Ike iṅomi gị na kaadị ebe nchekwa na-agbake data
Salvage faịlụ site na gị agbajikwa gam akporo.
dr.fone Toolkit Nkwa
Naghachi gị furu efu data na a udo nke uche.
Gbalịa ya Free N'ihi na 30 Days!
Nyochaa data n'ụzọ zuru ezu tupu mgbake
Naghachi ihe ọ bụla ihe ị chọrọ na ngwaọrụ
Ọ dịghị mmerụ gị data na ngwaọrụ na niile
Ọgụgụ naanị, ọ dịghị data nọ ma ọ bụ leaked
Interface maka onye ọ bụla iji
Gbalịa mee ihe ndị software for free ụbọchị 30
Gam akporo Data Mmịpụta (mebiri emebi Ngwaọrụ)
Dee a Review
Mirror, mirror na mgbidi, onye bụ onye kasị mma dike n'ụwa?
Ee! Wondershare Dr. Fone bụ! Zọpụtara ndụ m (na foto)! M ike na-ekele ezuru na-emepe emepe dị otú ahụ a oké omume!
Magburu onwe gam akporo mgbake software
M zụtara a otú m nwere ike naputa ihe niile na m Mama ya Samsung Galaxy Phone mgbe a format.
Site Matthew Trompf
Daalụ nke ukwuu!
M mmadụ na mberede ehichapụ foto m wee si m Samsung S3 n'abalị ikpeazụ m ezigbo iwe were ya n'ihi na foto ndị nke nwa m nwaanyị \_ 's mbụ uwe agbamakwụkwọ na-agbalị na. M kpere ekpere ka a ga-arụ ọrụ ma na ọ mere !! O were ogologo oge ma m ga-eme ya nile ọzọ na m ga-ikwu nke a ngwaahịa na-onye ọ bụla !! Daalụ ọzọ. M a nnọọ obi ụtọ na nne nke nwunye.
Atụmatụ & Aghụghọ
Olee otú Dịghachi Ndi ana-akpo site na gam akporo ekwentị na Broken Screen
2 Ụzọ Nweta gam akporo ekwentị na Broken Screen
Olee otú Dịghachi Text Ozi si Broken gam akporo Ngwaọrụ
Olee otú Ị kpọghee ekwt gam akporo ekwentị na a Broken Screen
Olee otú ndabere gam akporo ekwentị na Broken Screen
Olee otú Dịghachi Text Message si Broken Samsung Devices
Olee otú Idozi Bricked gam akporo igwe na mbadamba
Olee otú Idozi Samsung Galaxy Black Screen
Olee otú Idozi Samsung Galaxy ọnwụ mberede: Black Screen nke Ọnwụ
Anyị ahịa na-Ọzọkwa nbudata:
Naghachi-ehichapụ ma ọ bụ furu efu data si 6000+ gam akporo ngwaọrụ.
Gbalịa Ọ Free Gbalịa Ọ Free
Wepu ekpochi ihuenyo site na gam akporo ngwaọrụ na-enweghị adịkwa data.
Bibiri ndị ndabere gị gam akporo data na kọmputa ma weghachi ya dị ka gị mkpa.
Mac gam akporo Data Recovery
Nke a na-agbanwe asụsụ nke page. Ọ ga-agbanwe agbanwe ihe ọ bụla ederede banyere site na ọrụ
Copyright © Wondershare . Ikike niile echekwabara.